China Fithem ks-016 Wireless stereo neckband bluetooth Chip 5.0 sports headphone vagadziri uye vanotengesa | Kaiwansi
1. ks-016 chigadzirwa sumo
Hupenyu hwakasimba hwebhatiri pane imwechete yekuchaja Magineti ekumwa nano inoramba kuputira Bluetooth 5.0 nekukurumidza kutapurirana 3D odhiyo nekunzwa kunakirwa Dual bhatiri system inogona kutamba kwenguva yakareba, inotyisa mimhanzi yekuona isina kurasikirwa.
2. ks-016 paramende
Horn dhayamita Ø10MM
Battery kugona 110mAh
Usage nguva 6-8hours
Kutengesa nguva 1-1.5hours
Nguva yekumira 150hours
3. Zvimiro zveKs-016 nemaapplication
Iyo yekumberi-frequency dhizaini inoderedza vibration matambudziko, iyo yakaderera frequency yakanyanya kusimba, izwi revanhu riri nani, kunakirwa nerunako rwemimhanzi Iyo inoshamisa mubatanidzwa weakabhoni fiber inosanganiswa vibration modhi + hombe simba acoustic tekinoroji, inonzwika pasi pechiito chemagineti nemagetsi. , uye inodzoreredza odhiyo odhiyo yemumhanzi, Medium frequency izere, yakaderera frequency yakakora uye inochinja.
4. Ks-016 chigadzirwa ruzivo
Iyo yekurangarira mutsipa hanger inochinja uye yakapetwa. Iyo kora inogadzirwa neyekurapa mvura silicone, inova yakapfava seganda remwana, inodziya uye yakasununguka, yakagadzikana uye yakavimbika. Inogona kubhadhariswa mumasekondi uye ine yakasimba bhatiri hupenyu. Tsamba yega yega yakajeka uye yakachena.
5. Iyo yakapfuma bass ruzivo, mafizikisi akakwirira anomiririrwa zvakanaka, uye mupfumi Mezzo, akanaka kwazvo. Iko kushanda kuri nyore kwepakati pekutonga kunoitawo kuti vashandisi vanzwe kuve nyore kushandisa, iwo ruzha mhando zvakare anoverengeka ari pamusoro gumi mune iwo iwo maindasitiri, magetsi ari 110mAh anogona kutepfenyura maawa gumi nemaviri bhatiri zvakare akachengeteka kwazvo, chigadzirwa zvakare chine mamwe matanho akadai sevimbiso, unogamuchirwa kubvunza nekutenga.
Zvadaro: Fithem ks-020 bluetooth wireless earphone boss bhoti Leisure yemitambo mahedhifoni
FITHEM KS-017 isina tambo bhandi Makaralı musoro ...
FITHEM KS-015 Wireless Headphone rinobva attra ...
FITHEM KS-010 Wireless Makaralı Headphone LAG ...
Fithem Ks-009SBluetooth isina waya yemitambo yemvura ...